Home STARS EUROPEAN Mariano Diaz Tantaran'ny Ankizy Iray Manampy Untold Biography Facts
Mariano Diaz Tantaran'ny Ankizy Iray Manampy Untold Biography Facts. Credits: Diariolagrada
Rehefa manomboka izy dia nomena anarana hoe "Ny biby". Manome anao ny fandrakofana feno momba an'i Mariano Diaz Childhood Story, Biography, Family Facts, ray aman-dreny, fiainana voalohany, fiainana manokana, fiainana ary fety hafa fanta-daza hatramin'ny fahazazany hatramin'ny fahazazany.
Indro, manolotra anao fiainana voalohany i Mariano Diaz sy fiainana misandrahaka. Credits sary: Ara.cat, AS, Diariogol ary RealMadrid.
Eny, fantatry ny rehetra i Mariano fa ilay mpilalao Real Madrid izay tany am-boalohany tian'ny NEFA nahafantatra an'io daty mahafinaritra io (1 martsa 2020), ny andro nanalohany ny antson'i Real Madrid tamin'ny fandresena 2-0 nanohitra an'i FC Barcelona. Ny dikan-tenantsika momba ny Biography Mariano Diaz izay mahaliana. Ankehitriny raha tsy misy tohiny, atombohy aloha isika Loha ny Content mialoha ny azy FENO Tantara.
Tantara nataon'i Mariano Diaz:
Izao aloha dia iray amin'ireo sary voalohany indrindra nataon'i Mariano Diaz's Childhood Photo. bola: AS sy diariogol
Mariano Díaz Mejía dia teraka tamin'ny andro 1 aogositra 1993 ny reniny, Mariana Mejía sy ny rainy, Mariano Díaz (bodybuilder) any avaratra-atsinanan'i Barcelona, ​​Espana. Ny mpilalao baolina kitra espaniola dia nitombo teo anilan'ny zokiny sy ny rahavaviny iray Premià de Mar, tanàna Espaniôla izay noheverina ho ivon'ny fizahan-tany sy trano dormitory ho an'i Barcelona.
As ASwebsite nametraka izany, ny ray aman-drenin'i Mariano Díaz tamin'ny nahaterahan'ny zanany dia niteraka azy ilay anarana hoe "Mariano Diaz”Ary izany no mahatonga azy ho olona fahatelo hitondra ny anarana ao amin'ny fianakaviany. Fantatrao ve?… Ny roa amin'ireo ray aman-drenin'i Mariano Diaz - ny dadany sy ny dadabeny ary anisan'izany ny tenany dia manana anarana mitovy.
Tamin'izy mbola kely, dia nanokana fotoana be niaraka tamin'ny dadabeny i Mariano tanora izay niseho ho mpilalao baolina kitra niaraka tamin'ny klioba Katalanana tsotra. Noho ny maha-akaiky azy ireo no nampidirina taminy tsikelikely ny lalao baolina kitra.
Araka ny filazan'ny renin'i Mariano Diaz, raha nilalao baolina kitra i Mariano tamin'ny mbola kely, dia nijaly mafy ny rindrina ao an-tokantranon'ny fianakaviana satria niharan'ny marika baolina. Hoy koa izy marca fa i Mariano koa dia nampiasa ny tenda ho ny tanjony. Mipetraha ary miala voly rehefa manome antsipiriany bebe kokoa momba ny fahazazany Mariano Diaz tamin'ny baolina kitra amin'ny fizarana amin'ity lahatsoratra ity.
Mariano Diaz's Avy amin'ny fianakaviana sy Background:
Rehefa mitsara amin'ny endrika tarehin'ilay mpilalao baolina kitra ianao, dia hanaiky ahy ianao fa ny fianakavian'i Mariano Diaz dia mifangaro olona mifangaro. Ny marina dia, iray amin'ireo ray aman-drenin'i Mariano Diaz - ny dadany dia espaniola espaniola. Ny reniny kosa, avy amin'ny Repoblika Dominikanina. Mariana Mejía dia mponina ao San Juan de la Maguana (tanàna sy kaominina ao amin'ny faritra andrefan'ny Repoblika Dominikanina). Amin'ny fijerena ity sary mahafinaritra an'ny ray aman-drenin'i Mariano Diaz ity dia afaka maminavina ianao hoe iza amin'izy ireo no manana toetra ambony indrindra izay nalain'i Mariano. NY TSIA IZANY DIA HITA !!!
Hihaona amin'ny ray aman-drenin'i Mariano Diaz- I Mariano Diaz rainy sy ny reniny, Mariana Mejia
Fotoam-pianakaviana: Mariano Diaz dia avy amin'ny fianakavian'ny fianakavianà antonony ambony, iray izay niasan'ny dadany tamin'ny fomba ara-pivavahana, noho ny vola azo avy amin'ny orinasam-panatanjahantena azy. Taorian'izay, nanomboka tamin'ny taona 1990, ny fianakavian'i Mariano Diaz dia niantehitra tamin'ny indostrian'ny Fitness Fitness mba hahazoana vola izay hitazomana azy ireo.
Mariano Diaz's Fahazazana - taona voalohan'ny baolina kitra:
Tany am-piandohan'ny fahazazany dia niara-nilalao baolina tamin'ny rahalahiny i Mariano na aiza na aiza azony natao. Misaotra ny zafikeliny sy ny zokiny lahy, nanomboka tamin'ny alàlan'ny mbola kely izy tanora, Mariano tanora. Rehefa nitsidika ny tranon'ny fianakavian'i Mariano Diaz tany Espana ny haino aman-jery espaniola (Marca), dia nilaza taminy ny reniny ny momba ny famindram-pony tamin'ny zanany tamin'ny baolina kitra ny reniny. Amin'ny teniny;
“Nilalao foana tamin'ny rahalahiny tao an-trano i Mariano. Back kosa, nasiana marika baolina ny rindrina ary natao ho tanjona ny tenda.
Nilaza foana aho fa tsy hividy sipa vaovao aho raha tsy efa lehibe. Izany dia satria raha nividy vaovao aho dia hotapahan'izy ireo indray izany. Na ny namany dia mitovy amin'ny fony dimy taona. ”
Renin'i Mariano tamin'ny fampiakarana ilay mpilalao.
Mariano Diaz's Biography- Ny fiainam-piandohana voalohany:
Ny taona 2002 dia rehefa nanomboka ny dia lasa mpilalao baolina matihanina ho an'i Mariano. Fitsapana mahomby tamin'io taona io no nahitany azy niditra tao amin'ny akademisiana Reial Club Deportiu Espanyol, fantatra ihany koa amin'ny Akademika RCD Espanyol. Rehefa niditra tao amin'ny Akademia dia maro no nahita an'i Mariano ho zazalahy tsy dia mahalala fomba sy matotra.
Izany no karatry ny karaman'ny Akademia akademika RCD Espanyol Mariano. nahazoan-dalana: Diariolagrada
Nandritra ny Alevín B ao amin'ny RCD Espanyol, i Mariano dia i Lluís Planagumà Ramos. Rehefa afaka izany, ilay tovolahy dia nalaza noho ny hafainganam-pandehany izay hita fa toetrany voalohany. Hafainganam-pandeha lehibe no narahina ny fahazarana manarona ny marika ary manao zavatra ivelan'ny manga miaraka amin'ny baolina fandaka baolina. Fantatrao ve?… Tanjona 41 no hitan'i Mariano Diaz tamin'ny vanim-potoanan'ny haino aman-jery farany azy Pichichi Trophy izay nomen'ny solontena avy amin'ny orinasa Espaniôla Aigua del Montseny.
Mariano Diaz Childhood Photo- Ity dia omena mari-pankasitrahana amin'ny maha mpilalao baolina kitra azy. nahazoan-dalana: Diariolagrada
Nijanona tao amin'ny klioba nandritra ny efa-taona izay TSY vita ny fanaovana dia mitsambikina tsara.
Zava-misy momba ny Biography- Ny làlana ho an'ny tantara malaza:
I Mariano dia tsy nahazo alalàn'ny ekipan'ny Espanyol Infantil B nandritra ny vanim-potoana 2005-2006. Na dia tsy iray amin'ireo olona tena lehibe indrindra aza, ny olany lehibe dia ny:Haavo". Ny tsy mahafeno ny haavo ilaina amin'ny tanora an'ity sokajin-taona ity dia midika fa fandrahonana ny fijanonany amin'ny klioba.
Ny fandinihana ny fotoam-piarovany dia nihena ho tsy nilalao afa-tsy 15 minitra isaky ny lalao, nanapa-kevitra ny fihetsik'ireo ray aman-drenin'i Mariano Diaz tamin'ny alàlan'ny fanerena ny zanany lahy tsy ho eo amin'ny klioba. Nampidiriny tamin'ny Akademia Premià koa izy ireo izay nilalao hatramin'ny 2006 ka hatramin'ny 2008. Taorian'ny herintaona niaraka tamin'ny klioba manaraka (Sánchez Llibre) dia nahazo antso avy tao amin'ny tanora ny tanora. Badalona tao no namaranany ny asany tanora tamin'ny taona 2011.
Mariano raha tao amin'ny tarika Badalona dia nipoaka indray. Nolazaina fa tena haingana sy marani-tsaina eo amin'ny sehatra, trano kely iray izay nilalao tamin'ny fahatokisan-tena. Nahasarika ny Real Madrid izay tsy nahatohitra fa io no nahazo azy tamin'ny 2011.
Zava-misy momba ny Biography- Ny fivoarana tantara malaza:
Sahala amin'ireo nahazo diplaoma tamim-pianarana avy amin'ny klioba madinika, ny anjara amin'ny Real Madrid dia midika hoe miverina amin'ny baolina kitra tanora. Ny fandrosoana mamirapiratra dia nanao ny asany any an-trano tamin'ny alàlan'ny tanjona 50 ho an'ny Akademia Real Madrid alohan'ny nampiroboroboana ny ekipa lehiben'ny Zinedine Zidane. Ny naratra tamin'ny lamosina tamin'i Karim Benzema dia nahatazana azy nalaza. Saingy raha vao sitrana i Benzema dia lasa voafetra ho an'ny tanora ilay zaza. Na izany aza, nisy lanjany ny fandraisana anjarany tamin'ny fandresena ny amboara manaraka.
Raha tsy fantatrao, nandresy ny zava-drehetra niaraka tamin'i Madrid ny The Beast
Taorian'ny fanampiana an'i Real Madrid tamin'ny fotoana nivoahan'ny fanjanahan'izy ireo. Mariano tamin'ny faha-30 jona 2017, nanapa-kevitra i Mariano fa handao an'i Espaina ho traikefa kokoa amin'ny baolina kitra izy. Nanao sonia ho an'ny Olympique Lyonnais izy izay nahatratra tanjona 18 tamin'ny vanim-potoanan'ny ligy noho ny fiarahana mitokona tonga lafatra Memphis Depay ary Nabil Fekir (19 sy 18 tanjona tsirairay). Maneho ny tenany ho milina tena izy, nanapa-kevitra i Real Madrid haninjitra ny tanany mba hamerenany ny lehilahy iray.
Mitsangatsangana i Mariano Diaz miaraka amin'i Olympique Lyonnais
Ny andro faha-29 aogositra 2018, niverina tany Real Madrid i Mariano Diaz ary notahiana tamin'ny lobaka No7 napetrak'i Christiano Ronaldo. Ilay valimbola faharoa nataon'i Mariano ao Madrid dia efa nisy vidiny hatreto. Iray amin'ireo fotoana faran'izay tsara indrindra nataony nandritra ny Elclassico, tamin'ny andro voalohany ny volana martsa 1. Nidina avy teo amin'ny dabilio nandritra ny vanim-potoana izy, dia nitombo avo roa heny ny bibidia ny lohan'i Real Madrid tamin'ny fandresena 2020-2 tamin'i FC Barcelona tamin'ny minitra faha-0.
Ny kintana miakatra dia nanampy ny avo roa heny ny lohan'i Real Madrid tamin'ny fandresena 2-0 tamin'i FC Barcelona tamin'ny 1 martsa 2020 El Clasico
Mariano Diaz's Sipa, vady ary zaza:
Miaraka amin'ny fiakaran'ny lazany sy ny hanaovana anarana ho azy eo amin'ny baolina kitra, azo antoka ny ankamaroan'ny mpankafy te-hahafantatra raha toa ny lehilahy mahomby toa an'i Mariano Diaz dia manana sipa, na raha manambady tokoa izy, izay midika fa efa manambady. Ny marina dia, ao ambadiky ny mpilalao baolina mahomby, misy sipa manintona izay mandeha amin'ny anarany Yaiza Moreno Antho.
Yaiza Moreno dia modely ary mpamorona akanjo milomano izay efa nanambady an'i Mariano Diaz tamin'ny taona 2012. Raha mitsara ny endriny tokoa izy dia marina tokoa paragonaly tsara tarehy, iray izay manamafy ny fahatokisan-tena ao anatin'ny fandrika rehetra ao aminy.
Hihaona amin'ny sakaizan'i Mariano Diaz, Yaiza Moreno- Tsy mahafatifaty ve izy? Credit: Instagram
Fifandraisan'i Mariano sy Yaiza emanala baraka ny mason'ny besinimaro fotsiny satria tsotra sy be fitiavana ilay izy. Tsara tarehy Yaiza dia olona tsy tia tena izay tsy manao afa-tsy ny fanohanana ara-pihetseham-po amin'ny lehilahy azy, fa ianao kosa dia midika hoe mitazona ny fiainany.
Ilay vehivavy sakaizan'i Mariano Diaz Yaiza Moreno dia manohana ny lehilahy amin'ny zavatra rehetra ataony. Credit: Pinterest
Tamin'ny fotoana niverenan'i Mariano tany Real Madrid, mpankafy an-tapitrisany no nahitana ny fahitan'izy ireo ilay tovovavy mahatalanjona nahavariana nandritra ny fanolorany. Rehefa mitsara avy amin'ilay sary eto ambany dia hita Yaiza manana neken'ny ray aman-drenin'i Mariano Diaz. Midika izany fa ny fanambadian'izy ireo dia mety ho dingana manaraka.
Ilay vehivavy sakaizan'i Mariano Diaz Yaiza Moreno dia nalaina nandritra ny fampisehoana tao Madrid. Credit: Twitter sy dakarflash
Ny hahafantaranao ny fomba fiainan'i Mariano Diaz dia hanampy anao hahazo sary tsara kokoa ny fomba fiainany. Manomboka, ny fananana harato lehibe, sandan'ny vidin'ny € 16m ary mahazo karama isan-taona amin'ny 5 tapitrisa dolara (tamin'ny fotoana nanoratana) azo antoka fa mahatonga azy ho mpilalao baolina iray. Tsy isalasalana, afaka manana fomba fiaina mamirapiratra i Mariano.
Raha hiresaka ny fomba fiaina dia miaina fiainana milamina any Madrid i Mariano Diaz. Raha omena ny kisendrasendra dia tsy saro-kenatra izy ireo haneho ireo trano lehibe (mansions), akanjo fanamiana, akanjo hoho, tranom-bahoaka, yacht sns. Eny an-dalamben'i Madrid, tena mety hahita ilay akanjo mitafy saribakoly Mariano ianao ary manan-danja indrindra, mitondra ny fiara antitra marevaka.
Toa ny Car-Truth's Mariano Diaz dia aleony ny fomba fanao amin'ny sekoly taloha
Ankoatra ny baolina kitra, i Mariano dia mpamily mahay ihany koa. Fantatrao ve?… Vantany vao nahavita fahatelo izy tamin'ny fifaninanana go-karting nokarakarain'i Audi. Nentiny fahatelo noho ny mpamily haingana; Nacho ary Ramos.
Mariano Diaz's Fiainana manokana:
Iza i Mariano Diaz eo amin'ny Pitch?… Ny valiny dia, he, olona mahatsiaro tena mahazo aina amin'ny natiora. Raha tia kisoa ary antsantsa, dia tsy irery ianao. Ny marina dia, mety ho faly ianao hahafantatra fa toa anao i Mariano- A Die-Hard Pig sy Shark tia.
Tian'i Mariano mitsidika toerana iray antsoina hoe “Paradisa”Tao Bahamas, izay ifandraisany amin'ny namany tsara indrindra (jereo eto ambany). Iza no mahalala?… Mety hampiasa ny iray amin'ireny biby ireny aza i Mariano.
Mahafantatra ny fiainam-piainam-piainan'i Mariano Diaz amin'ny lalao. Credit: Instagram
Farany, amin'ny fiainam-piainanan'i Mariano Diaz, izy dia olona mifikitra amin'ny fanambarana tiany indrindra izay manaraka izao;
"Zava-dehibe ny mijery foana izay alehanao fa tsy mijery izay misy anao".
Mariano Diaz's Fianakaviana:
Ho an'ny mpilalao baolina kitra marobe, ny làlan'ny stardom dia tsy ho mora arakaraka satria tsy misy ny fanampian'ny mpianakavy. Raha miresaka momba ny fianakaviana dia toa tsy niara-nihalehibe irery niaraka tamin'ny ray aman-dreniny i Mariano, fa niaraka tamin'ny anadahiny sy rahavaviny tsara tarehy koa. Amin'ity fizarana ity dia hanamaivana bebe kokoa ny ray aman-drenin'i Mariano Diaz sy ny olona sisa ao amin'ny fianakaviany mahafinaritra.
Ny tsara indrindra amin'ny fianakavian'i Mariano Diaz izay azontsika jerena. Zahao ankehitriny ny fiasan'ny rainy. Trosa: Tumblr
Bebe kokoa momba ny dadan'i Mariano Diaz:
Rehefa mitsara amin'ny endriny feno sary amin'ny sary etsy ambony ianao dia hanaiky ahy ianao fa ny rain'i Mariano Diaz dia toa bodybuilder. Ny tena marina dia izy dia tompon-daka espaniola izy tamin'ny fanomezam-boninahitra azy ireo.
Na dia tamin'ny taonany aza, i Mariano Diaz Snr dia mbola mitantana ny gym Premià del Mar, ilay faritra eo amin'ny morontsiraka Catalunya izay nahaterahan'ny zanany lahy Mariano. Raha nilaza ny fitarihan-drainy ny asany dia nilaza i Mariano indray mandeha;
“Miaraka amin'ny dadako mankany amin'ny gym aho matetika. Misaotra azy, nianatra nanao fanazaran-tena sy fandrindrana ny ratra aho, izay tsara ho an'ny asako. "
Bebe kokoa momba an'i Mariano Diaz's Mum:
Reny be dia be no niteraka zanaka lahy baolina kitra ary tsy i Mariana Mejía. Teratany San Juan de la Maguana izy (tanàna sy kaominina ao amin'ny faritra andrefan'ny Repoblika Dominikanina) amin'ny alàlan'ny fahaterahany sy ny fiaviany.
Fantatrao ve?… Anisan'ireo ray aman-drenin'i Mariano Diaz dia i Mariana Mejía izay manana fototarazo satria izy sy ny zanany lahy sy ny zanany vavy no nitazona ny lokony. Aseho eto ambany, samy mankafy ny fifandraisana akaiky toa azy ireo i Mariana sy Mariano.
Hihaona amin'ny Renin'i Mariano Diaz- Mariana Mejía- Samy hita ho mifanakaiky. Credit: dogdrip
Bebe kokoa momba an'i Mariano Diaz's Granddad:
Tsara kokoa ny antsoina hoe zafikelin'i Mariano Mariano Diaz Snr2. He tompon'andraikitra amin'ny baolina kitra miditra ao amin'ny ra mandriaka ny fianakaviana. Raha tsy teo izy dia tsy ho mpilalao baolina kitra i Mariano. Raha ny tena izy, ny toetran'ny tsy mahafoy dia avy amin'ny dadabeny, mpilalao baolina kitra iray sy ny fifehezana taloha izay nilalao ho an'ny klioba Katalanana.
Bebe kokoa momba ny rahalahin'i Mariano Diaz:
I Mariano Diaz dia manana rahalahy zandriny izay mandeha amin'ny anarana Eduard Marcel Núñez (sary etsy ambony). Toa an’i Mariano, mpilalao baolina ihany koa izy no milalao ho an'ny CE Vilassar de Dalt. Ity klioba baolina ity dia mipetraka ao amin'ny tanàna iray any Catalonia, Espaina (ao amin'ny faritany Barcelona).
Mba hampahafantarina anao koa, rahalahin'ny rahalahin'i Mariano, Eduard Marcel Núñez, dia zandriny amin'ny mpianakavy hafa antsoina hoe Pedro Antonio Núñez. Pedro, mpilalao baolina kitra iray dia teraka tao Hato Mayor del Rey, Repoblika Dominikanina.
Bebe kokoa momba ny rahavavin'i Mariano Diaz:
Rehefa mitsara avy amin'ny sarin'ny fianakaviana manetry tena etsy ambony, dia hiombon-kevitra aminao izahay fa toa manana rahavavin'i Mariano, iray izay mitovy amin'ireo mpiray tam-po aminy hafa taorian'ny fanjakàn'ny mamanany.
zava-misy #1: Ilay mihetsika halatra;
Mariano Diaz indray no niharan'ny fanenjehana nandroba. Ity tranga ity dia nitranga taorian'ny nitsidihany ny fivarotana lehibe iray hita any amin'ny arabe Calle Serrano, Madrid (Tatitry ny tranonkala Ronaldo).
Raha nitsangantsangana teny an-dalana nitondra harona entana vao novidiny izy dia nisy olona iray nanatona azy ary nanandrana nangalatra ireo kitapo ireo. Taorian'ny niantsoantso vonjy dia nirohotra nankany amin'ny ilany amin'ny arabe ity voarohirohy ity. Roa ny olona nihazakazaka taorian'ilay suspect izay nangalatra ireo kitapo avy tany Mariano. Rehefa avy nahery setra izy, dia nariany tamin'ny tany ny kitapo. Narahina izay nosarahin'i Mariano ka namela izany ary nandao ny seho raha tsy nahazo alàlana tamin'ny fitsabahan'ny polisy.
zava-misy #2: Nandao ny filalaovana ho an'ny fireneny reniny izy:
Nanaiky ny fahazoany hilalao ho an'ny Repoblika Dominikanina i Mariano indray mandeha. Vokatr'izany dia nanao ny fifaninanana iraisam-pirenena tamin'ny 24 martsa 2013 izy tamin'ny lalao am-pirahalahiana tamin'i Haiti, rehefa azony ny baolina farany tamin'ny fandresena 3-1.
Fantatrao ve?… izay angamba no lalao farany nataony talohan'ny nanapahany hevitra ny hanolotra ny fireneny. Nanao izany i Mariano mba tsy hahatongavany ho be Cap-mifatotra ary koa, raha jerena ny ekipa nasionaly any Espana azo atao. Io fampandrosoana io no nahatonga azy handà ny fanasana hafa avy amin'ny fireneny.
zava-misy #3: A Julia Roberts Fan:
Ao amin'ny tontolon'ny olo-malaza Hollywood, dia nahazo fahefana i Real Madrid. Fantatrao ve?… Julia Roberts dia iray amin'ireo mpankafy olo-malaza voalohany tao amin'ny klioba izay nihaona tamin'i Mariano. Ity ambany ity dia miaraka amin'i Mariano Diaz tamin'ny iray tamin'ny fitsidihana nataony tany an-drenivohitra Espaniôla.
Nihaona tamin'i Julia Roberts indray ny Real Madrid Star. Credit: Instagram
zava-misy #4: Famotoran-karamany:
Hatramin'ny niverenany tany Real Madrid, ireo mpankafy dia nanomboka nandinika tsara ny zava-misy nataon'i Mariano Diaz, toy ny vola azony amin'ny alika Espaniola.
Tamin'ny 29 aogositra 2018, nanisy fifanarahana fifanarahana dimy taona i Real Real miaraka amin'i Real Madrid, izay nahita azy niantoka karama farany. € 4million isan-taona. Manaraka ny fandoavana ny karaman'i Mariano Diaz isika dia manana izao manaraka izao.
Vola any Euro (€)
Vola amin'ny Sounds Pounds (£)
Vola amin'ny USD ($)
Per Year € 5,000,000 £ 4,294,250 $5,643,100.00
isam-bolana € 416,666 £ 357,854 $470,258
Isan-kerinandro € 104,116 £ 89,463.5 $117,564
Isan'andro € 14,881 £ 12,780.5 $16,795
Per Hour € 620 £ 532.5 $699
Isaky ny Minut € 10.3 £ 8.86 $11.6
Isaky ny segondra € 0.17 £ 0.14 $0.19
Toy izao ny vola azon'i Mariano Diaz hatramin'ny nanombohanao ity pejy ity.
Fantatrao ve?… Ny mpiasa salanisan'ny mpiasa any Espana dia mila miasa mandritra ny 2.3 taona farafahakeliny € 333,333 izay vola azontsika Mariano Diaz manokana ao anatin'ny iray volana.
zava-misy #5: Mariano DiazTattoo:
Miorina amin'ny kolontsaina tatoazy izay tena malaza amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena ankehitriny i Mariano. Raha jerena eto ambany dia manana tatoazy izay mampiseho ny fivavahany sy ireo zavatra tiany ny mpilalao baolina kitra Los Blancos.
Tattoos Mariano Diaz- Ny pataloha dia manana tombokavatsa maro eo amin'ny tanany havia. Credit: Instagram
zava-misy #6: Mariano DiazFivavahana:
Rehefa mitsara avy amin'ny sary hosodoko avy amin'i Mariano Diaz etsy ambony izay misy ny sarin'ny virjiny Maria, dia hanaiky ianao fa ny ray aman-dreniny no tena mety nitaiza azy hifanaraka amin'ny finoana ara-pinoana kristiana misy azy. Fivavahana Katolika.
Farany, amin'ny Biography Mariano Diaz, omenay anao ny wiki nahalala azy. Ny latabatra etsy ambany dia hanampy anao hahita vaovao momba azy amin'ny fomba fohy sy mora.
Mariano Diaz Biography Facts (Wiki Enquiries)
Anarana feno: Mariano Díaz Mejía.
Daty sy toerana nahaterahana: 1 Aogositra 1993 (26 taona), Premià de Mar, Espaina.
Ray aman-dreny: Mariano Diaz Snr (Ray) sy Mariana Mejía (Neny).
mpiray tam-po Eduard Marcel Núñez (rahalahim-pianakaviana) ary rahavavy iray
Fianakaviana: Espaina (an-dRaman'i) ary Repoblika Dominikanina (an-dReny)
hahavony: 1.80 m (5 ft 11 in)
Weight: 76 kilao
asa: Mpilalao Football (Striker)
Hajaina (Amin'ny martsa 2020) La Liga: 2016–17,
Tompondaka eran-tany FIFA: 2016.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaran'ny zaza madinidinika Mariano Diaz sy Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, miezaka ny hisian ny fahitsiana sy ny rariny isika. Raha mahita zavatra tsy tsara ianao dia miangavy anao hizara izany amin'ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hajainay sy hajainay foana ny hevitrao.
David Silva Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Jolay 7, 2016